Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Caalamiga ee Maalinta Caruurta (Universal Children’s Day) iyo baaqa JWXO
Xuska Caalamiga ee Maalinta Caruurta (Universal Children’s Day) iyo baaqa JWXO
14kii December 1954 ayuu Golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay soo saaray Qaanuun ka dalbaya dawladaha caalamka inay aqoonsadaan maalin la xuso caruurta oo dunida oo dhan laga xuso walaalnimada iyo isfahamka ka dhexeeya caruurta. Qaramada Midoobay waxay talo ku dhiibatay in maalintaa ay noqoto maalin la qabto hawlo lagu horumarinayo dareenka caruurta ku nool dunida oo kor loogu qaadayo daryeelkooda. Wuxuuna ahaa go’aanka in dawlad walba maalin u aqoonsato maalinta laga xuso caruurta dalkeeda si kor loogu qaado daryeelka caruurta.
20ka November waa maalinta Qaramada Midoobay (United Nations) laga soo saaray Baaqa Xuquuqda Ilmaha (Declaration of the Rights of the Child), taasoo ahayd 1959. Hadaba maalintan 20ka November ayaa loo aqoonsaday inay noqoto maalin dib loogu noqdo baaqaa si loo fiiryo wixii dawlad walba ay ka hirgalisay.
Itobiya waa dawladda 1aad een aqoonsanayn wax la yidhaahdo xuquuq uu leeyahay qofka aadanaha ah gaar ahaan xuquuqda shucuubta ay gumaysato. Caruurta ku nool wadamada ay Itobiya gumaysato ayaan helin xaqqa ugu yar ee caruurta caalamka ku nool haday tahay daryeel caafimaad iyo haday tahay waxbarasho iyo haday tahay ilaalinta nafsiyada caruurta oon xamili karin dhibaatada ay ciidanka Itobiya u gaysanayaan eheladooda iyagoo dhowraya.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay ugu baaqaysaa dadweynaha S.Ogadenya inay iska kaashadaan daryeelka caruurta uu gumaysiga agoonteeyay iyo kuwa uu ka soo barakiciyay dalkoodii (Riix Halkan). Sidoo kale waxay JWXO ugu baaqaysaa dhamaan waalidka iyo dhalinyarada Ogadenya inay ku dadaalaan waxbarashada Caruurta oo waqtigooda ugu badan ay galiyaan sidii loo soo saari lahaa jiil aqoon leh. Inay ku kalsoonaadaan Guusha in aan hanan doono oo mustaqbalka uu leeyahay Gobanimadoonka, Ilaahayna uu kaalmeeyo qofkii naftiisa u gargaara.